चुनावी मैदानमा एमाले नेताहरुले मोर्चा कसे (कुन नेता कहाँ तैनाथ ?) – YesKathmandu.com
बिहीबार ०१, असार २०७४
काठमाडौं । दोस्रो चरण निर्वाचनको सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरु मैदानमा मोर्चा कसेर बसेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही दिनअघि प्रदेश नम्वर ५ मा पुगेर विशाल सभा गरे । नेपालगन्ज र दाङ पुगेका ओलीले मैदानमा खटेर लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । त्यसैगरी एमालेका दुई उपमहासचिव प्रदेश नम्वर ५ को बुटवलमा मोर्चा कसेर बसेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादीको चुनावी तालमेल भएपछि उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भूषाल बुटवलमा छन् ।
‘निर्वाचनमा सवैले जित्ने चाहाना राख्छन् तर कतिपय स्थान यस्ता हुन्छन् जहाँ पार्टीले नजिति हुँदैन’ उपमहासचिव भुषालले भने ‘बुटवल पार्टीले जित्नै पर्ने स्थान हो त्यही भएर हामी मोर्चा कसेर बसेका छौ ।’
त्यसैगरी पाटीका सचिव प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण बिष्टले गुल्मी, पाल्पा र अर्खाखाँचीमा कम्मर कसेका छन् । उनीहरुले एमालेलाई जिताउन दिनभर घरदैलो र साँझ योजना बनाउने गरेका छन् । पहिले पनि एमालेको राम्रै पकट भएको पाल्पा, गुल्मी र अर्खाखाँचीमा एमाले नेताहरुले पसिना बगाईरहेका छन् ।
प्रदेश नम्वर ५ मा एमालेका लागि सवैभन्दा बढि चुनौति र प्रतिष्ठाका स्थान हुन् दाङ र बाँके । दाङ र बाँकेमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल विगत १० दिनदेखि मोर्चा कसेर बसेका छन् । संविधान सभाको निर्वाचनमा एमाले दाङबाट पराजित भएको थियो । तर यसपटक दुई उपमहानगरपालिकामा सफलता पाउने नेता पोखरेलले बताए । ‘पहिलेको भन्दा अहिले दाङ एमालेका लागि निकै राम्रो भएको छ, धेरै स्थानमा एमालेले जित्छ’ पोखरेलले भने ।
त्यसैगरी बाँके र बर्दियामा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम अबको केही दिनमा जाँदैछन् । उनी एकसाता बाँके र बर्दियामै बस्ने योजना रहेको छ । बाँके र बर्दियामा जिताउने जिम्मा पार्टीले उनलाई दिएको छ ।
त्यसैगरी प्यूठानमा एमाले प्रचारबिभागका उप संयोजक सूर्य थापाले मोर्चा कस्ने भएका छन् । उनी पनि प्रदेश नम्वर पाँचतिर लागि सकेका छन् । नेपालगन्ज, दाङ हुदै प्यूठान जाने उनको योजना रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्वर सातमा एमाले नेता भीम रावल पुगिसकेका छन् । प्रदेश नम्वर सातमा एमालेलाई जिताउन महेन्द्रनगरमा उनले पनि मोर्चा कस्ने भएका छन् । सात नम्वर प्रदेशमा सवै जिल्लामा पुग्ने उनको योजना रहेको छ । रावलसँगै एमालेका सवै केन्द्रीय नेताहरु सात नम्वर प्रदेशमा पुगिसकेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्वर एकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराई पुगेर राजधानी फर्केका छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापा पुगेका भट्टराईले चुनावी रणनीतिका बारेमा स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग छलफल पनि गरेका थिए । प्रदेश नम्वर एकमा केही दिनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि पुग्ने भएका छन् ।
प्रदेश नम्वर २ मा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पुग्ने भएका छन् । सचिव भीम आचार्य र लालबाबु पण्डित विराटनगरमा पुगिसकेका छन् । प्रदेश नम्वर २ मा एमालेका धेरै केन्द्रीय नेताहरु पुगेको एमालेले जनाएको छ ।
बाबुपछि छोरालाई कारवाही ! बिराज विष्टलाई मन्त्रीबाट हटाउने तयारी